प्रदेश २ सरकारको अर्काे मजाकः ५ बर्षमा आर्थिक बृद्धि ११ प्रतिशत पुरयाउने दाबी - TodayKhabar
प्रदेश २ सरकारको अर्काे मजाकः ५ बर्षमा आर्थिक बृद्धि ११ प्रतिशत पुरयाउने दाबी
जनकपुरधाम, २३ पुस । प्रदेश सरकारले ११ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य सहितको पहिलो पञ्चवर्षिय आवधिक योजनाको आधारपत्र बुधबार सार्वजनिक गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पहिलो पञ्चवर्षिय आवधिक योजना सार्वजनिक गर्नुहुँदै नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको योजनाहरु यसैलाई टेकेर अगाडी बढाउने बताउनुभयो । आवधिक योजनाको आधारपत्रलाई टेकेर योजनाहरु ल्याउने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश नीति आयोगका अध्यक्ष समेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री राउतले आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि आवधिक योजनाको आधारपत्रलाई टेकेर योजनाहरु समावेश गर्ने बताउनुभयो ।
बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले आउँदो पाँच वर्षपछि प्रादेशिक आर्थिक वृद्धि दर ११ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो । प्रदेश २ को आर्थिक वृद्धि दर ६.५३ बाट आउँदो पाँच वर्षमा ११ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य राखिएको उहाँले बताउनुभयो । २७.७ प्रतिशत रहेको गरिबी दर घटाएर २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।
प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ४ सय ८८ अर्वबाट ६ सय अर्व पुर्याउने लक्ष्य लिएको उपाध्यक्ष डा. झाले बताउनुभयो । अगामी पाँच वर्षमा प्रदेशको प्रति व्यक्ती आय एक हजार अमेरिकी डलर पुरयाउने लक्ष्य राखिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख सचिव रामकृष्ण सुवेदी, मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । – टुडे खोज
भारतले जारी गरेको नयाँ ट्राभल अडभाइजरी नेपालीको हकमा फरक नपर्ने
करिश्मालाई जब श्रीमानले उनको साथीसँग सुहागरात बिताउन दबाब दिए…